I-Jennifer Hudson Family Murder Case
Amalungu omNtsapho amaKhankanya ekufeni
Ngo-Oktobha wama-24, 2008, imizimba ye-Academy Award-winning actress uJennifer Hudson nonina kunye no-mzalwana wafunyanwa kwindlu yentsapho yase-Chicago South Side. Ukufa kwabulawa ngumama ka-Hudson, uDarnell Donerson, kunye nomntakwabo, uJason Hudson. Ukungabikho ekhaya kwakunguYulian King, unyana kaJennifer udadewabo kaJennifer.
Kwiintsuku ezintathu kamva isidumbu sika-Julian oneminyaka engu-7 ubudala, umntakwabo ka-Hudson, satholakala kwisitulo sangasemva seSUV esephandle kwi-West Side.
Kwakhona wadutshulwa. Isibhamu se-.45-caliber esasifumane kufuphi neSUV esepaki sasixhunywe kuzo zonke zokufa. I-SUV kamva yaqinisekiswa ukuba yowomntakwabo u-Hudson owabulawa, uYein King. Kwakhona umpu ufunyenwe kwisithuba esingenanto kwindawo efanayo kunye ne-SUV, kusho amaphoyisa.
Icala lenza umdla kazwelonke ngenxa yegama lomntu wentsapho uJennifer Hudson, ophumelele i-Award Academy Award ngendima yakhe ye-2007 kwifilimu ethi "Dreamgirls". U-Hudson waqala ukufumana udumo emva kokuxoshwa kwixesha elinesithathu kwe-talent show "i- American Idol ."
Umyeni kaYulia odibeneyo wabuza
UWilliam Balfour, indoda engumyeni kaYulia Hudson, wathinjelwa ngomhla wokuqala kwamalungu amabini okuqala kwaye abanjwe iiyure ezingama-48. Wabe esetotyathwa yiSebe lase-Illinois leZilungiso malunga nokuphulwa komthetho we-parole.
UBalfour watshata noJulia Hudson ngo-2006 kodwa wahlukana ngexesha lokudubula.
Wayephonswa ngaphandle kwendlu ka-Hudson ngumama kaJulia ebusika ka-2007, ngokweengxelo. Waliphi na ukubandakanyeka kwimeko ye-Hudson waza waphika iingxelo ezazibonwe ngompu, kodwa wahlala enkundleni yamapolisa.
UBalfour wakhonza iminyaka engama-7 entolongweni emva kokuvalelwa enkundleni yokuzama ukubulala, ukuthumba iinqwelo zeenqwelo kunye nokuthunjwa kweloliwe.
Wayesesikhatsini sokubulawa kwakhe.
UBolfour waboshwa kwiSikolo soKhuseleko saseKaritzville apho wayebanjwe ngamacala okuphula umthetho . Abatshutshisi babekholelwa ukuba ukudubula ekhaya lasekhaya laseHarson kwakubangelwa ingxabano uB balfour wayeneYulia ngomnye umntu. Abaphandi bafunda ukuba uBalfour uzame ukufumana intombi engaphambili, uBrithany Acoff-Howard, ukumnika u-alibi oyinyaniso ngomhla owabulawa ngawo.
'Ndiya Kubulala Intsapho Yakho'
Ngokwamaphepha eenkundla, uBalfour wayesongela ukuba abulale amalungu omndeni kaHarson ubuncinane kwiihlandlo ezimbini ngaphambi kokubulala abathathu ngo-Oktobha 2008. I-Attorney kaRhulumente weeNkxaso uJames McKay uthe le ntshitshi yaqala emva nje kokuba uBalfour kunye nomkakhe uJulia Hudson baphule yendlu yentsapho.
UMcKay wathi uBalfour watshela uJulia ukuba, "Ukuba uthe wandishiya, ndiza kukubulala, kodwa ndiza kubulala kuqala intsapho yakho.
Emva kokuphendula imibuzo malunga nolwazi lwabo lomculi kunye nomdlali we-actress uJennifer Hudson, ama-jurors angama-12 kunye namanye amathandathu athatywayo akhethwa kwilingo.
Amagosa angenakwenzeka kwilingo abanikezwa imibuzo ebuza ukuba bajwayelene nomsebenzi kaHarson, ukuba babehlala bebukele "i-American Idol," kwaye nokuba babe ngamalungu abaLandi bePilisi, inkqubo yokulahleka kwesisindo apho i-Hudson isithethi soMdumo.
Ijaji yayiqulethwe ngabasetyhini abalishumi elinesibhozo kunye namadoda ayisibhozo kwaye babehlukeneyo ngokobuhlanga. Ngesikhathi elinde ukuvula iingxelo ukuqala inyanga emva koko, uMgwebi uCharles Burns wacela abagwebi ukuba bangaboni umboniso wethelevishini "i-American Idol," kuba i-Hudson yayilungiselelwe ukuba ibonakale kwisiqephu esizayo.
Ngethuba leengxelo zokuvula, ummeli wezokuvikela u-Balfour utshele ii-jurors ukuba amapolisa amjolise kuye ngenxa yolwaphulo-mthetho kuba bephantsi kwengcinezelo yokuxazulula ngokukhawuleza into ababeyazi ukuba iya kuba yimeko ephakamileyo, ngenxa kaJennifer Hudson.
Ummeli wezoKhuseleko u-Amy Thompson utshele i-jury ukuba i-DNA efunyenwe kwisibhamu kunye neminwe yeminwe efumaneka kwi-SUV, apho isidumbu sikaJulian sifumaneka iintsuku ezintathu kamva, asizange siqhathanise neBalfour.
UBalfour wamangalelwa enetyala kwaye wathi akukho ndawo kufuphi nendlu xa kubulawe.
'Asizange Sithande Indlela Ayemphatha ngayo'
"Akukho namnye kuthi wayefuna ukuba atshade naye [uBalfour]," uJennifer Hudson utshele ijaji, "Asizange sithande indlela amphatha ngayo."
Udadewabo kaJennifer Hudson u-Julia wangqina ukuba uBalfour wayenomona kangangokuba wayeya kuba nomsindo xa unyana wakhe uJulian embanga unina. Wayeza kumxelela umntu oneminyaka eli-7 ubudala, esithi, "Suka umkami," wangqina.
UBrithany Acoff Howard wangqina ukuba uWilliam Balfour wamcela ukuba amgubungele ngo-Oktobha 24, 2008, ngosuku lwamalungu omndeni ka-Hudson abulawe. UWoward utshele ii-jurors ukuthi uBalfour wamnceda wamthengela ingubo yakhe kwaye wamphatha njengodade omncinci.
"Wandixelele ukuba xa umntu ecela kuwe, ndibe entshonalanga yonke imihla," kusho uAcoff Howard. Ekuphenduleni ubungqina obushushisayo, uthe uBalfour wamcela ukuba amqambe amanga.
Akukho DNA, kodwa i-Gunshot Residue
Umhloli wobuPolisa base-Illinois State uRobert Berk utshele i-jurors ukuba i-residu ye-gun ibonwe kwivili lokuhamba kwezithuthi zikaBalfour kunye nesigxina se-Suburban. Ubungqina bakhe balandela omnye womhlalutyi, uPauline Gordon, owathi akukho mvelaphi ye-DNA ye-Balfour efunyenwe kwisixhobo sokubulala, kodwa oko kwakungazange kuthethe ukuba akazange athathe isigxina.
"Abanye abantu bachitha iiseli zesikhumba ngokukhawuleza," kusho uGordon. "Iiglovu zaziye zagqithwa."
Ijaji lenza iinyanga ezili-18 ngaphambi kokufumana uBalfour unetyala ngamanani amathathu okubulala kunye nezinye iindleko malunga ne-Oktobha 24, 2008, ukufa kukaDarnell Donerson; UJason Hudson; kunye nomntwana wakhe oneminyaka engu-7 ubudala, uJulian King.
Emva kwesigqibo, amalungu ejury achaza inkqubo abasebenzisa ngayo ngexesha leeyure ezingama-18 zeengxoxo.
Okokuqala, bavotela ukuba ingqina ngalinye lithembekile okanye cha. Emva koko badala ixesha lomda wolwaphulo-mthetho ukulifanisa kunye nabameli be-Balbi ba-Alibi bachazwe ngexesha lovavanyo.
Xa ijaji yafika malunga nokuthatha ivoti yokuqala, yayingama-9 ukuya kwe-3 ukulungiselela ukukholelwa.
"Abanye bethu bazama konke okusemandleni ethu ukumenza angenacala, kodwa amaqiniso awakungekho," u-Tracy Austin utshele abaphephandaba.
Ngaphambi kokugwetywa, uBalfour wavunyelwa ukuba enze ingxelo. Ngaloo nto, wazinikezela induduzo kwintsapho yaseHudson kodwa wahlala engenacala.
"Imithandazo yam enzulu iphuma kuYulian King," kusho uBalfour. "Ndimthanda, ndiyamthanda.
Ngaphantsi komthetho wase-Illinois, uBalfour wayejongene nobomi obunyanzelekileyo ngaphandle kwezivakalisi ze-parole zokubulala ezininzi. Umthetho wase-Illinois awuvumeli izivakalisi zokugweba ukufa phantsi kweemeko.
"Unentliziyo yobusuku obujikelezayo," uMgwebi uBurns utshele uBalfour kwivalelo yakhe yokugweba. "Umphefumlo wakho unguye njengendawo engabonakali."
UBalfour ugwetyelwe ubomi obungenasiphelo.
I-Grammy ne-Academy I-winning-winning i-Hudson ibambezele kwaye ixhomekeke kwigxala lakhe lokugxekwa njengoko isigqibo somgwebo sifunyiwe. Wayeyo yonke imihla yovavanyo lweentsuku ezili-11.
Kwintetho, uJennifer nodadewabo uJulia banikezela ukubonga kwabo .
"Siye sabona uthando kunye nenkxaso evela kubantu bonke emhlabeni kwaye siyavuya kakhulu," kusho isitatimende. "Sifuna ukudlulisela umthandazo ukusuka kwintsapho yase-Hudson ukuya kwintsapho yaseBalfour.
Bathi bebathandaza "ukuba iNkosi iya kuxolela uMnu Balfour wezenzo ezibuhlungu kwaye yenze intliziyo yakhe ibe yenguquko ngosuku oluthile."
I-Balfour iyaqhubeka nokulwa nokubandakanywa
NgoFebruwari 2016, u-Balfour uthetha udliwano-ndlebe nguChick Goudie we-WLS-TV, kwisikhululo soodade sase-Chicago. Le nto yayingumngqungquthela wakhe wokuqala udliwano-ndlebe ukususela ekukholweni kwakhe. Ngethuba lo dliwano-ndlebe, uBalfour wathi ukukholelwa kwakhe kwakungenxa yeqhinga elikhulu elibandakanya amapolisa, amangqina, kunye namagqwetha kwaye wayengenanto enokuyenza ngayo ngokubulala.
Xa ebuzwa isizathu sokuba uJulian King oneminyaka engama-7 ubudala abulawe, impendulo kaBalfour yayibetha.
Balfour: "... Ingaba yayiyindawo engafanelekanga ngexesha elingafanelekanga, umntu oza apho ukuba abulale umntu abulali abo bawabulalayo. Ukuba ungangqina kwaye unokwazi ukubona umntu, banokuthi wambulala ngenxa yokuba wayenokundiqonda kodwa akunjalo. "
UGoudie: "Loo mfana oneminyaka eli-7 unokukufumanisa."
UBalfour: "Into endiyithethayo ngaphambili, ukuba uyakwazi ukundibona kwaye yintoni eyayibulala. Okanye wambulala ngenxa yokuba wayemqonda.
Ekuphenduleni kwendlebe ndlebe, iSebe lePolisa laseChicago lathi, "I-CPD imisa ngokusisigxina emva kophando lwethu olusekelwe kuphela kwiinyani kunye nobungqina balobu bulala obungenangqondo."
U-Balfour okwangoku ukhonza ixesha lakhe kwisiGqeba soLuleko se-stateville kufuphi ne-Joliet, e-Illinois.
Ukubulawa kukaBridgett Frisbie: Isifundo seNkundla
Funda ngoDemokhrasi ngqo kunye neNzuzo kunye neNgcono
7 I-James Bond amaFilimu ahamba kunye noRoger Moore
Indlela yokukhetha phakathi kwePan kunye neTope Watercolors
Iimpazamo eziphambili ezenziwe ngabaQaleli beTable Tennis / Ping-Pong
Iimoto ezimnandi zentlalo ngaphantsi kwama-20,000
I-Symbolism yamangcwaba: Amacwecwe kunye neePing
Indlela i-NHL Draft Works
I-5 ye-ABC Iingoma eziphezulu ze-80s
Ii-100 ezidume kakhulu kwiHorror / Movies Suspense yexesha lonke